China Yakagadziriswa Cylinder Kugadzira uye Fekitori | Chinatown
Iyi nhepfenyuro yakadzvanywa nesirinda grader, isati yasvitswa, ichaiswa pasi pebvunzo dzinoverengeka dzemhando yepamusoro, kuve nechokwadi chekuti chigadzirwa chose chine hunhu hunodiwa uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Yedu FGJZ yakateedzana indered humburumbira ndeyekuchenesa zviyo uye kuisa muchina unoshandiswa kubata zviyo zvakaita segorosi, bhari, mupunga, chibage, zvichingodaro. Inogona kubvisa tsvina dzakapfupika kana kureba kudarika zviyo, pamwe nekuisa zviyo maererano nehurefu hwadzo.
Iyi nhepfenyuro yakadzvanywa nesirinda grader, isati yasvitswa, ichaiswa pasi pebvunzo dzinoverengeka dzemhando yepamusoro, kuve nechokwadi chekuti chigadzirwa chose chine hunhu hunodiwa uye hupenyu hwakareba hwebasa. Uye zvakare, iyo yekuendesa nguva ipfupi.
1.Muchina unogona kunyatso bvisa zvese zvisipo zvipfupi uye zvakareba.
2. Iyo modular dhizaini yezvinhu uye inochinjika yekudyisa chishandiso inoita iyo masilinda achinje zviri nyore pakati peakateedzana kubatanidza uye yakafanana kubatana.
3. Iyo humburumbira inogadzirwa neakanyanya anti-kupfeka zvinhu, saka hupenyu hwayo hwebasa hwakareba.
4. Iyo yakasenderedzwa humburumbira inogona kuvharirwa muzvikamu zviviri, uye nekuuya nekukurumidza kuunganidza mudziyo. Nekudaro ivo vanofambisa vanogona kukurumidza uye nyore kuchinja masirinda.
5. Iyo indents inogadziriswa neyakaumbiridzwa yekugadzira michina. Iko pamusoro peiyo indered sese ine blunted, saka zvese zviri zviviri hunhu uye mukurumari zvinogona kuvandudzwa.
Type Kukwanisa Simba Vhoriyamu Yemhepo Kuramba Dhayamita × Kureba Cylinder Zvakawanda Saizi (L × W × H) Kurema
Pashure: Round Kubatanidza Chain Conveyor
Zvadaro: Chain Conveyor
Nyowani Bhendi Conveyor
Hupfu Mill Machinery Pulse Jet Sefa